Unilorin ကုစားရေးဆိုင်ရာ Portal www.remedial.unilorin.edu.ng/rem_login.php: လက်ရှိကျောင်းသတင်း
Unilorin ကုစား Portal www.remedial.unilorin.edu.ng/rem_login.php နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်
အတွက် Filed ကျောင်းသတင်း by TMLT တည်းဖြတ်ခြင်း ဇွန်လ 18, 2021 အပေါ်
Unilorin ပြန်လည်ကုစားရေး Portal - ဤသည် Ilorin တက္ကသိုလ်၏ကုစားပေါ်တယ်သည်စတင်လည်ပတ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့်သက်ကြီးကျောင်းသားများအားလုံးကိုအသိပေးရန်ဖြစ်သည်။
ဤစာမျက်နှာတွင်ပေါ်တူဂီမှဘာမျှော်လင့်ရမည်ကိုအကြံဥာဏ်ပေးပါလိမ့်မည်။ ဒါ့အပြင်၊ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုဘယ်လို ၀ င်ရမလဲဆိုတာကိုလမ်းညွှန်ပေးမှာဖြစ်ပြီး ၀ င်ခွင့်စာရင်းထုတ်ပြန်ချိန်မှာလည်းမွမ်းမံပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်မတိုင်မီက၊ Unilorin နှင့် ပတ်သက်၍ ဘာသိထားသနည်း။
ထို့ကြောင့်ပြန်လည်ကုစားမှုအစီအစဉ်ကိုခံယူနေသောကျောင်းရှိကျောင်းသားများအားလုံးသည် portal မှတဆင့်အရေးကြီးသောပညာရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။
Ilorin တက္ကသိုလ် Unilorin အဖြစ်လူသိများသည်။ ၎င်းသည် Ilorin ရှိဖက်ဒရယ်အစိုးရပိုင်တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်သည်, Kwara ပြည်နယ်, နိုင်ဂျီးရီးယား။ ၎င်းကို ၁၉၇၅ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင်ဖက်ဒရယ်စစ်အစိုးရ၏အမိန့်ဖြင့်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ၁၉၇၅ ခုနှစ်တွင်တက္ကသိုလ်ကောလိပ်အဖြစ်စတင်ခဲ့သည်။ ဆက်နွယ် Ibadan တက္ကသိုလ်.
အဆိုပါတည်ထောင်ခြင်း၏ပညာရေးညွှန်ကြားချက်များထဲမှအကောင်အထည်ဖော်ရန်ရည်ရွယ် တတိယအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်း။ ဤရွေ့ကား, တက္ကသိုလ်ပညာရေးဆည်းပူးရန်ဆန္ဒရှိနိုင်ဂျီးရီးယားများအတွက်ပိုပြီးအခွင့်အလမ်းများကိုပေးရည်ရွယ်ခဲ့သည်။
ထို့အပြင်လျင်မြန်စွာတိုးတက်နေသောစီးပွားရေးအတွက်အလွန်အဆင့်မြင့်သောလူအင်အားကိုထုတ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်နိုင်ငံ၏အခြားမြင့်မားသောသင်ယူမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၎င်းအဖွဲ့အစည်းတွင်မြေဟက်တာ ၅၀၀၀ ခန့်အကျယ်အဝန်းရှိသောအကြီးဆုံးမြေမြေပိုင်နက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Unilorin ကုစား Portal ၏အရေးပါမှု
အဆိုပါ Unilorin ကုစားပေါ်တယ် တက္ကသိုလ်၏အဟောင်းနှင့်အလားအလာရှိသောကျောင်းသားများအတွက်ဖန်တီးထားသည်။ ဒါ့အပြင်အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ခြင်း၊ ဥပမာ -
Plus အား, ဝန်ခံချက်စာတစ်စောင်ကို download နှင့်သင်၏အချက်များကို (GP & CGPA) ဘယ်လိုတွက်ချက်နိုင်မလဲနှင့်အခြားသင်ယူမှုနှင့်ဆက်စပ်သောလှုပ်ရှားမှုများ။
Unilorin ကုစား Portal ကို Login
Ilorin တက္ကသိုလ် (UNILORIN) ကုစားသည့်ကျောင်းသား၏ login portal ကိုအောက်ပါ link မှတစ်ဆင့်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
Unilorin ကုစား Portal: https://remedial.unilorin.edu.ng/rem_login.php
Ilorin တက္ကသိုလ်၏စီမံခန့်ခွဲမှု (UNILORIN) သည်ပြန်လည်ကုစားရေးအစီအစဉ်သို့တက်ရောက်ရန်သင့်တော်သောအရည်အချင်းပြည့်မီသောလျှောက်ထားသူများထံမှလျှောက်လွှာကိုဖိတ်ကြားသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဓိကလိုအပ်ချက်များမှာ -
လျှောက်ထားသူများသည်အစည်းအဝေးနှစ်ခုထက်မပိုသောခရက်ဒစ်အဆင့်တွင်ဘာသာရပ်ငါးခုကိုသင်ရမည်။ ၎င်းသည် WAEC, NECO, NABTEB ကစီစဉ်သော SSCE / GCE တွင်ဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်ဒီတွင်လေ့လာမှု၏အဓိကဘာသာရပ်များပါဝင်သည်သငျ့သညျ။
သို့ရာတွင်၊ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနှင့်သင်္ချာဆိုင်ရာအတန်းခရက်ဒစ်ရမှတ်များသည် Ilorin တက္ကသိုလ်ရှိမည်သည့်အစီအစဉ်ကိုမဆိုတက်ရောက်ရန်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်ကိုသတိပြုပါ။
မှတ်ချက် - BA (Hons ။ ) English တွင်ပဏာမအစီအစဉ်မရှိပါ
၂။ စိုက်ပျိုးရေး၊ အင်ဂျင်နီယာနှင့်နည်းပညာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံ၊ သိပ္ပံနှင့်သိပ္ပံပညာရေး၊ နည်းပညာနှင့်ပညာရေးနည်းပညာ
လျှောက်ထားသူများသည်အောက်ပါဘာသာရပ်များကိုခရက်ဒစ်အဆင့်အတန်းရှိရမည်။ WAEC / NECO နှင့် NABTEB မှဖွဲ့စည်းသော SSCE / GCE ရှိအစည်းအဝေးနှစ်ခုထက်မပိုသောအင်္ဂလိပ်ဘာသာ၊ ဇီဝဗေဒ၊ ဓာတုဗေဒ၊ သင်္ချာနှင့်ရူပဗေဒ။
UNILORIN ကုစားအစီအစဉ် Duration
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုနှစ်ခုစာသင် (ပညာသင်နှစ် session တစ်ခု) ၏ကြာချိန်အဘို့ဖြစ်၏။
ကျောင်း၏ဘုတ်အဖွဲ့သည်၎င်း၏ပညာရေးမူဝါဒတွင်အားလုံးပါ ၀ င်မှုပါ ၀ င်မှုအနေဖြင့် (၅) O 'Level ဘာသာရပ်များရှိသော်လည်းအင်္ဂလိပ်ဘာသာနှင့်သင်္ချာဘာသာရပ်တွင်ချို့တဲ့သောလျှောက်ထားသူများသည်အစီအစဉ်အတွက်လျှောက်ထားနိုင်သည်ကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။
သို့သော်သူတို့သည်ဒီဂရီပရိုဂရမ်သို့ ၀ င်ခွင့်အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်ဘာသာရပ်တွင်မှတ်ပုံတင်ပြီးခရက်ဒစ်ကဒ်ရရှိရန်လိုအပ်သည်။
ဒါ့အပြင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်ကိုလေ့လာလိုသူသည်ဓာတုဗေဒ၊ သင်္ချာနှင့်ရူပဗေဒဘာသာရပ်များမှအကြွေးအဆင့်များရရှိပြီး JAMB / UTME ရှိအင်္ဂလိပ်ဘာသာ၊ ဓာတုဗေဒ၊
ထို့အပြင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများသည် JAMB / UTME နှင့်သက်ဆိုင်သောဘာသာရပ်ပေါင်းစပ်မှုများကိုဝိဇ္ဇာသို့မဟုတ်သိပ္ပံဘာသာရပ်များရှိမည်သည့်ပရိုဂရမ်များတွင်မဆိုရေးသားရမည်။ UTME သည်တက္ကသိုလ်မှအတည်ပြုထားသောအနိမ့်ဆုံးအဆင့်ကိုရရှိရမည်။
အစီအစဉ်များသို့ ၀ င်ခွင့်အတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အစီအစဉ်တစ်ခုစီ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ပမာဏအပေါ်အခြေခံရမည်။
ထို့အပြင်ကျောင်း၏ပရိုဂရမ်စာမေးပွဲများပြီးဆုံးသွားသော်လည်းတက္ကသိုလ်မှအတည်ပြုထားသောအနိမ့်ဆုံး JAMB / UTME ဖြတ်တောက်ခြင်းအမှတ်ကိုမရရှိနိုင်သည့်ကျောင်းသားများသည်ပြန်လည်ကုစားမှုရလဒ်ကိုနောက်နှစ်အတွက်သာအသုံးပြုနိုင်သည်။
သို့သော်ဤအရာသည်နောက်နှစ်အတွက်အတည်ပြုထားသော JAMB / UTME အနိမ့်ဆုံးသတ်မှတ်ချက်ရရှိသည်။
နေရာ UNILORIN ကုစား အစီအစဉ်
အစီအစဉ်၏နေရာသည်ကူရာပြည်နယ်၊ Ilorin တောင်ပိုင်းအစိုးရဌာနချုပ်၊ Fufu၊ ပဏာမလေ့လာရေးကျောင်းတွင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်လျှောက်ထားသူသည်အစီအစဉ်သည်လူနေအိမ်ဖြစ်ကြောင်းသတိပြုရမည်။
LASU ကျောင်းသား Portal
ဖက်ဒရယ်တက္ကသိုလ် Oye Ekiti Portal
သင်၏ပေါ်တယ်သို့ဝင်ရောက်ပါ (https://remedial.unilorin.edu.ng/rem_login.php.). သို့သော်သင်၏ကုစားလျှောက်လွှာနံပါတ်ဖြင့်ပြုလုပ်ပါ။ ဥပမာ - UIL / REM / 2018 / …နှင့်သင်၏ ၀ င်ရောက်မှုအခြေအနေစစ်ဆေးရန်သင်၏စကားဝှက်။
ယာယီဝန်ခံချက်ကမ်းလှမ်းလျှင်, တစ် ဦး နှင့်အတူလက်ခံမှုပုံစံဖြည့်ပါ ပြန်အမ်းမရသောလက်ခံမှုခ Ten Thousand Naira (N10,000) ၏။ ဒါ မထားဘူး ကျောင်းလခ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။
အထက်ပါအချက်အလက်များကြောင့် Unilorin ပြန်လည်ကုစားသည့်အစီအစဉ်အကြောင်းသင်ပိုမိုသိရှိလာပြီဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ သို့သော်၊ သင်ဤအချက်အလက်များကိုသူငယ်ချင်းများနှင့်မျှဝေပါ။
UNILORIN ၀ င်ခွင့်ဆိပ်ကမ်း www.uilugportal.unilorin.edu.ng/ နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်
University of Ilorin စုဆောင်းမှု 2020 နောက်ဆုံးပေါ်လျှောက်လွှာ Portal ကိုနောက်ဆုံးသတင်းများကိုကြည့်ပါ
Coinbox လီမိတက်စုဆောင်းမှု Portal ကို 2020 | www.coinboxlimited.com.ng
HUKPOLY သည် Mark 2020/2021 နှင့် Departmental Cut off Point တို့ကိုဖြတ်တောက်ပါ
Howbury ကျောင်းစုဆောင်းမှု 2020/2021 လျှောက်လွှာပုံစံ Portal
၁၀ အနိမ့်ဆုံးကျေးလက်ဒေသပြင်ပကောလိပ်ကျူရှင် ၂၀၁၀
Tags:: unilorin ကုစားဝန်ခံချက်စာရင်းစစ်ဆေးရပုံ, unilorin ကုစားပေါ်တယ်၏အရေးပါမှုကို, ကုစားဝန်ခံချက်လိုအပ်ချက်များကို unilorin, ကုစားပေါ်တယ် unilorin, ကုစားပေါ်တယ် login unilorin, ကုစားအစီအစဉ်ကြာချိန် unilorin, Ilorin တက္ကသိုလ်, အဆိုပါ unilorin ကုစားအစီအစဉ်၏နေရာ
« ၂၀၂၁ ဒုတိယစီမံခန့်ခွဲမှုဒါရိုက်တာအတွက် PricewaterhouseCooper ၀ န်ထမ်းခေါ်ယူခြင်း
2021 ဘွဲ့လွန်အုပ်ချုပ်ရေးလက်ထောက်များအတွက် PricewaterhouseCooper (PwC) စုဆောင်းမှု »